Barcelona oo ka hadashay mustaqbalka Ousmane Dembélé, kadib kulankii Arbacada ay la qaateen wakiilkiisa – Gool FM
(Barcelona) 16 Nof 2018. Agaasimaha ciyaaraha kooxda Barcelona José Segura yaa carabka ku adkeeyay inaysan wax dhibaato ah ku qabin ciyaaryahanka reer France ee Ousmane Dembélé.
José Segura ayaa wareysi uu ku bixiyay radio “Cadena SER” wuxuu kaga hadlay in Ousmane Dembélé uu yahay ciyaaryahan leh tayo aad u wanaagsan, balse wuxuu dhinaca kale tilmaamay inuusan ku soo nooleyn xirfadiisa kubada cagta xaaladan oo kale wuxuuna yiri.
“Waa da’ayar aan horey u sameynin dadaal si uu ula qabsado qaab ciyaareedkan oo kale, waxaan aqoonsanay waxay ku qaadan karto, waxa aan sameyneeno ayaa ah sida aan kaga shaqeyn lahayn si uu ula qabsado qaab ciyaareedka ugu fiican uguna macquulsan”.
Dhinaca kale José Segura ayaa hoos u dhigay inuu ka hadlo muhiimada kulankii ay la qaateen Arbacadii lasoo dhaafay wakiilka Ousmane Dembélé.
Balse wuxuu ka hadlay xiisaha kaga imaanaya Ousmane Dembélé kooxda Liverpool sida uu baahiyay wargeyska “The Sun” agaasimaha ciyaaraha kooxda Barcelona José Segura ayaana beeniyay arintan
“Ilaa iyo haatan ma heysano wax war ah ee ku aadan Ousmane Dembélé, mana dooneyno inaan badalno qorshaha ama nidaamka kooxda”